musha OCEANIA FOOTBALL STORI Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yakapedzisira Kugadziriswa pane September 30, 2019
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rezita rokuti "Woody". Yedu Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza iwe yakazara nhoroondo yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekumuka kwaChris Wood. Image Credits: DailyMail, SoccerTop uye CambridgeFootball
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye anokwikwidza anorwaidza neziso rekupora zvibodzwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Chris Wood's biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, mazita ake akazara ndiChristopher Grant Wood. Chris Wood akazvarwa pazuva re7th raDecember 1991 kuna amai vake Julie Wood uye baba, Grant Wood muAuckland, guta riri kuNorth Island yeNew Zealand. Akazvarwa semwana wechipiri uye mwanakomana wekutanga kuna mai vake vanoratidzwa pazasi.
Chris Wood Amai naSekuru
Chris Wood akaberekerwa mumusha wechiKristu ane mauto midzi uye yepakati-yemhuri yemhuri mamiriro ekumashure. Muzukuru wake akafananidzirwa pamusoro aive mukuru wemauto asati afa. Akakurira pamwe chete nasisi vake mukuru Chersey Wood uyo akangofanana naye anova zvakare nyanzvi yebhora.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Ivo mukoma nemunin'ina mukuru vachiri kumba vaigara vachitamba vachipokana. Chris akakurudzirwa nevabereki vake kuti aende kunun'una wake kuManhunga Sports, kwaakadzidza kunakidzwa kwemitambo yechikwata.
Aida kudzidza zvakawanda, vese Chris nasisi vake vakafambira mberi kuti vagamuchire nhabvu kuWynrs, iyo Auckland-yakavakirwa chikoro chakavambwa neaimbove All White Wynton Rufer. Yakanga iri kuWyners Chris Wood akagadzira hunyanzvi hwake uye aive akagadzirira kuenda kumitambo yebhora.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Pakusvika zera re11, mhuri yeWood yakasiya guta reNewzealand reAuckland ndokutamira kuguta rekumaruwa reWaikato kuCambridge riri 24 makiromita kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweHamilton. Dhorobha mhuri yake yakatamira ku "Cambridge"Inozivikanwa se"Guta reMiti & Makwikwi". Ndiri ikoko, Chris nasisi vake vakapinda Chikoro cheSt.
Chris akafarira kwazvo kuenderera mberi nebasa rake kubva kwaakasiya. Kufarira kwake nhabvu kwakamuona achipfuura miedzo uye kunyoresa kutamba junior nhabvu nenzvimbo yekirabhu- Cambridge FC. Pazasi payo pikicha yeChris mudiki nevaaibata navo.
Chris Wood (akafananidzirwa kuruboshwe kwakanyanya kwetambo yepakati) - Makore ake Ekutanga neCambridge FC Academy.
Maererano Cambridge FC webhusaiti, Chris Chris paanga ari 14, anga atove hombe unit- zvichireva kuti aive akakura uye akasimba. Panguva iyoyo, wechidiki anga akagadzirira kutamba nhabvu yepamusoro.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Kare ikako, nhengo yeCambridge FC Ken Hobern, shamwari yemhuri yeWood yaifara kuziva kuti mudiki uyu angave aine mutambi wechikamu wake wekutanga anotaridzika. Waizviziva here? Ken akavimbisa Chris Wood $100 kana aigona kuvhara chinangwa kusaziva chinangwa chaingove maminetsi kubva pane rubatso rwake.
Chris akapinda mumutambo uyu sewe kutsiva uye mukurumbira wake wechinangwa mushure mekupomba padutavhu rake raisanganisira kufadza pamwechete zvigunwe. Kuita uku kwakanakidza vateveri nenhengo dzese dzemhuri.
Mushure mekupopota kumakundano emuno Hamilton Wanderers mumwaka wakatevera, Chris Wood akakwezva kutarisirwa kwe ASB Premiership kirabhu Waikato FC iyo yakamuwana mu2007. Kunyangwe paakapinda mukirabhu, Wood akacherechedzwa nenhamba dzinoverengeka dzezvirwere muEuropean dzakakumbira signature yake. Achangotamba mitambo ye5 nechikwata ichi, Chris Wood akabvutwa neboka rechirungu, West Brom.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Wood akakurudzirwa kuWest Bromwich Albion's Academy nemurairidzi Roger Wilkinson, uyo akamumutsira muedzo iye waakapfuura neruvara rwakabhururuka. Ndichiri kuchikoro, Chris Wood akawana fomu rakapfuma rekupinda zvinangwa zveWest Brom's young academy side, iro raimanikidza murairidzi wake kuti amuise pane yake yepamusoro timu yechishuwo.
MunaEpril 2009 yakakuvara kune vanoverengeka West Brom vatambi vakaona Wood ichipiwa kushamiswa kudana kumusoro kuWest Brom yekutanga-timu. Akaburuka pabhenji kuti ave weChishanu Nyowanier kuzotamba muPremier League. Paaive kuEngland, akashanda achizvininipisa kuti adzidze basa rake nekuenda kuchikwereti, achiva akasimba nemwaka uye achibata zvakanyanya sezvaaigona kubva kumurairidzi wega wega.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora, Wood aripo anozivikanwa semurwiri wetsiva wenhabvu yeChirabhu nhabvu nhabvu, anyoresa zvinopfuura 100 zvinangwa mumakirabhu ese aakambotamba. Mutambi we6 ft 3 anova mutevedzeri wemutungamiriri weBurnley FC panguva yekunyora parizvino anonakidzwa nekudyidzana kwakasimba nemutungamiriri wezvekunamata wekirabhu. Ashley Barnes.
Chris Wood Kukwira Kumukurumbira. Mufananidzo Chikwereti: PlanetFootball uye DailyStar
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira, zvine chokwadi chekuti vazhinji veBurnley neNewzealand nhabvu vateveri vebhola vanofanirwa kunge vakafungisisa kuti Chris Wood Girlfriend kana Wife angave ani. Chokwadi chinofanira kutaurwa! Iko hakuna kuramba chokwadi chekuti kutaridzika kwake kwakanaka kwaisazomuita chidadada kune vamwe vevasikana vake vateveri.
Nekudaro, kuseri kweiyo Newzealander yakabudirira, kune musikana akanaka kumeso kwaiye akanaka Kirsty Linnett. Musikana akanaka waChris Wood anofananidzirwa pazasi nemurume wake muchitoro chekofi muAlderley Edge, Cheshire. Vese vaviri vadikani vakatanga kufambidzana pazuva re14th raJuly 2015.
Met Chris Wood Wife- Kirsty Linnett. Kiredhiti TheGuardian
Waizviziva here? Musikana akanaka waChris Wood ari zvakare mutambi wenhabvu. Senge panguva yekunyora, anoridza Liverpool neIngland under-23 timu yenyika. Pazasi pane mufananidzo waKirsty Linnett mukuita nechikwata chake Liverpool, sezvaanotora anopikisa.
Kirsty Linnett muchiitiko cheLiverpool. Kiredhiti TheGuardian
Vese mukomana nemusikana anodada nechero vamwe nzira yebasa. Zvinoenderana naKirsty… '"Zvichava zvakanaka kutarisa kumashure kana takura uye kutaura kuti isu vaviri takafanira kurarama zvedu zviroto,'
Chii chakadai kune vaviri vaviri, kudanana sehunyanzvi Mabhiza: Kune vese Linnett uye Wood, "Nhabvu inogara ichisvika pakutanga". Anobvuma kuti sevaroorani, dzimwe nguva vanogumburika pakuita kweumwe neumwe mushure memitambo yavo. Ose Linnett naChris havambo pikisi pamusoro pehutongi hwekure sezvo nhabvu inogara yakamira ne terevhizheni yavo kumba.
Zvichiri kushamisa kune vamwe vateveri kuti vese Wood naLinnett vasati varoora kana panguva yekunyora. Nekudaro, kutonga nenzira iyo vese vari kunakidzwa nehupenyu hwavo, zvine chokwadi chekuti muchato wavo unogona kunge uri wedanho rinotevera.
Chris Wood naKirsty Linnett- Nhabvu nhabvu nyanzvi yeBhola Couple
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Chris Wood Life Life chokwadi kwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake kubva pagomba rekutamba.
Asides nhabvu, Wood inoteedzawo mimwe mitambo yakadai; kumhanya bhiza, rugby mubatanidzwa, kiriketi, baseball neNetball. Iye anoda kutora chikamu mukupfura uye akasanganiswa kaviri tenisi.
Heano mamwe eChris Wood mabasa kunze kwedanda. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
Pamusoro peChris Wood hupenyu, iye munhu ane hushamwari, anotaurirana uye anogara akagadzirira kunakidzwa. Pane zvishoma maitiro ekungoerekana akomba zvakanyanya, kufunga uye kusagadzikana sezvo ivo vari zvinhu zvakawanda zvekuita.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Chris Wood anozviratidza semumwe wevatengesi vemhuri yake vanofara kuva navo akagadzira nzira yemhuri yake yake inoenda kurusununguko rwemari nekuda kwebhola. Zvino, heino imwezve info pamusoro pemitezo yemhuri yake.
Chris Wood Baba: Grant Wood, uyo akanyanya kuzivikanwa nezvavo ndi baba vaChris. Anorumbidzwa nekukurudzira mwanakomana wake nemwanasikana wake kutora chikamu pamwechete muOnhunga, zvinova zvinoita yavo yekutanga kirabhu. Kusiyana nemukadzi wake, kune zvishoma kufambiswa kwenhau paari.
Chris Wood Mum: Akanaka Julie Wood ndiChris 'Mum. Kusiyana nemurume wake, iye haana kuita kuedza kudzivirira vezvenhau. Pazasi payo pikicha yakanaka yaJulie nemwanakomana wake Chris sezvo ivo vaviri vakapinda zuva reZIMZ umo vakapemberera muzukuru waChris.
Sangana naJulie Wood- Amai vaChris Wood. Chifananidzo Chemifananidzo: Twitter
Chris Wood Sista: Iye zvino ngatitii tikutaurire zvakawanda pamusoro paChelsey uyo ari mukoma waChris Wood anotamba nhabvu saiye. Chelsey akamiririra nyika yake, New Zealand senge iri pasi pe20 panguva ye2008 U20 Women’s World Cup muChile. Chelsey aivawo chikamu cheiyo 2010 U20 Women’s World Cup kuGermany. Kutamba Under-20 mugore 2008 nekureva zvinoreva kuti mukuru kune mukoma wake.
Waizviziva here? Chelsey pazera re4 akatanga kutamba nhabvu nemukoma wake. Iyi yaive nguva vese vaive vasina kutanga kutamba kuzvikoro zvavo. Kubva pazera re4 kusvika 12, Chris Wood akatamba muzvikwata zvimwe chete semu hanzvadzi wake wechikuru akanaka anofananidzirwa pazasi.
Chris Wood Sista pamwe nemukoma wake. Chikwereti ku Twitter
Chris Wood Sekuru: Pakati nasekuru vake, Chris Wood aive padyo neumwe wevazukuru vake uyo asina kunonoka asi asina kukanganikwa. Pazasi payo pikicha yaSekuru vake vaaida zvikuru. yeuka: Muzukuru waWood aive musoja pamudhara asati apfuura.
Sangana naWood's Granddad uyo aive Ex-mauto murume asati apfuura. Chikwereti ku Twitter
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
"Zvave kunaka kuve nechikara ichi !! Kurota mota, ida!" Awo aive mazwi aChris Wood apo anonongedza mota yake, iyo inopa nzwisiso iri nani mumararamiro ake.
Zvazvinoratidzika naChris Wood Lifestyle. Chikwereti ku Twitter.
Kune Wood, dpakati pezvakakodzera padanho uye mafaro kubva pagomba haisi sarudzo yakaoma. Anoda kushandisa mari yake yebhora pane zvinhu zvaanokoshesa.
Chris Wood Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Waizviziva here? Chris Wood ndomumwe wemazita anoremekedzwa kusvika kure Nhabvu yeNew Zealand ine hanya. Iyo yekumberi inoremekedzwa zvekuti akagadzwa kuve nhengo yebhodhi yeNew Zealand Professional Footballers 'Association.
An activist yevakadzi Bhora: Chii chimwe chaunotarisira. Chris Wood's hanzvadzi nemukadzi wake kuve vese nyanzvi dzebhola. Zvibayiro zvakaitwa nemunun'una wake uye nematambudziko aakatarisana nemusikana wake Linnett akaita kuti Wood ave mumiriri akazvimiririra wemamiriro nani mumutambo wevakadzi. “Izvo hazvisi zvekuita nemusikana anotamba nhabvu kana hanzvadzi inotamba nhabvu, ndezve kuita izvo zvakanaka. " Chris Wood akamboudza Guardian.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Chris Wood Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Burnley Nhau Dhivhari